Archive du 20180430
Mampihavana ny FFKM Hampihaonina ireo depiote nifamango
Tontosa omaly tolakandro ny fotoam-bavaka notarihin’ny FFKM teny amin’ny EEM Ambohimanoro nenti-nitondra am-bavaka ny firenena manoloana izao toe-draharaha misy izao. Ireo filoham-piangonana efatra mirahalahy izay ahitana ny filohan’ny FLM Dr Rakotonirina David,
Fampihavanam-pirenena Tsy hitsabaka amin’io ny vahiny, hoy ny CFM
Efa nifanatona tamin’ny filohan’ny Repoblika, ny filohan’Antoko, ireo mpifanadrina ny filankevitry ny fampihavanana Malagasy na ny CFM manoloana izao raharaham-pirenena misavorovoro izao, raha ny nambaran’ny filohany Maka Alphonse omaly teny amin’ny fiangonana EEM Ambohimanoro.
Michaelle Jean – OIF « Fifampiresahana ihany no hahazoana fitoniana »
Omaly alahady 29 aprily no tonga teto Madagasikara ny sekretera jeneralin’ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny Frankofonia (OIF), Rtoa Michaelle Jean.
Hetsiky ny depiote 73 Miketrika paikady hanalefahana azy ny fitondrana
Tsy misy intsony ny fanakanana fivoriana na fandehanana amin’ny arabe sy fidirana amina birao na sampandraharaham-panjakana. Tapitra hatreto ny baomba mandatsa-dranomaso, malalaka ny mpanohitra amin’izay ataony sy teneniny.
Hetsiky ny mpanohitra Fitokonana faobe manomboka anio
Zavatra roa no nisongadina sy nampiavaka ny hetsiky ny depiote ho an’ny fanovana ny sabotsy lasa teo. Tao ny fahatongavan’ireo ben’ny tanàna HVM nanatevina ny fitakiana.
Marc Ravalomanana Hiresaka amin’ireo depiote
Mitombina hatrany ny hoe atambatry ny finoana sy ny fivavahana ny mpanao politika Malagasy, fa akorontan’ny politika. Mahafinaritra ny mahita azy ireo miray seza sy miara-dalana sy mifandray tanana ary rehefa miresaka dia samy maneho fa zava-dehibe ny fifampiresahana sy ny fihavanana, ka maro no namaly ny antson’ny FFKM tetsy amin’ny EEM Ambohimanoro omaly.
Krizy politika Governemanta iraisan’ny rehetra no tena vahaolana
Nambaran’ny filoha nasionalin’ny fikambanana HAFARI Malagasy Rafanomezantsoa Jean Nirina fa ny fananganana governemanta iraisan’ny rehetra ihany no tena vahaolana, aorian’ny fandrodanana ny governemanta misy amin’izao fotoana.
Sendikan’ny mpiasa Hanatevina ny tolona eny amin’ny kianjan’ny 13 mey
Ho avy hanatevina ny tolona etsy amin’ny kianjan’ny 13 mey sy ny hetsika tanterahin’ireo solombavambahoaka 73 mianadahy ny sendikan’ny mpiasa tsy an-kanavaka.
AOM Tokony ho vaindohan-draharaha ny lalam-pifidianana
Saika ho isan`andro no misy antoko politika na fikambanana manao fanambarana manoloana ny zava-niseho tamin`ny sabotsy lasa teo. Ho an`ny Antenimieran`ny Olobe manerana an`i Madagasikara (AOM) dia mila manalavitra ny disadisa samihafa izay entina hampisaraham-bazana sy ho fanapotehana indray ny firenena izay efa tafahitsoka lalina ny ankolafin-kery politika rehetra.
Midororororoa eo ihany e
O ry Jean aa ! miha miakatra ihany anie izany dian’ny eny an-kianja izany ee !! Manao ahoana ianao izao ? Dia efa miteny aho izay koa ! Midorororoa eo ihany ! rehefa mipoaka angamba ny sarombilany vao hikoropaka ianareo.
Loza amin’atambo Hikatso ny fadintseranana
Hikatso ny raharaha eny anivon’ny fadintseranana manomboka ny alarobia 2 mey satria nanamafy ny hanampy tosika ny hetsi-pitolomana eny amin’ny Kianjan’ny 13 mey ny mpiasa, raha ny nambaran’ny filohan’ny Sendikan’ny Mpiasan’ny Ladoany SEMPIDOU, Herizo Andrianavalona ny sabotsy lasa teo.
Groupe Vidy Varotra Nitohy tany Mantasoa ny fankalazana ny faha-15 taona
Taorian’ny hetsika niarahana tamin’ireo mpiara-miasa teny amin’ny hotel Carlton ny alarobia 18 aprily lasa teo dia nitohy teny amin’ny Domaine de l’Ermitage – Mantasoa ny sabotsy 28 aprily teo ny fankalazana ny faha-15 taona niorenan’ny “Groupe Vidy Varotra”.
Fanampiana an’i Eric FOU HEHY Namaly ny antso ny prezidansa
Voan’ny aretin’ny voa ihany koa i Eric Rakotoarimanana ilay mpanao hatsikana fanta-daza ao amin’ny tarika Fou-Hehy.
Basikety Tompondaka nasionaly N1 B Andro faha-3 ny anio alatsinainy 30 aprily 2018
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy tamin’ny sabotsy 28 aprily teo tetsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara 2018 taranja Basikety Baolina sokajy N1 B izay haharitra hatramin’ny faha-6 mey izao.
Baolina kitra Analamanga andro faha-15 Ady goavana ny an’ny As Adema sy Fosa Juniors Tanà rahampitso
Amin’ny maha andro tsy fiasana ny rahampitso talata 1 mey dia hisy ny fanatanterahana ny andro faha-15 eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ligin’Analamanga taranja baolina kitra.
Cjsoi Football 2018 Resin’i La Réunion tamin’ny tir aux buts 6-5 i Madagasikara
Nikatona ny sabotsy 28 aprily teo tany Djibouti ny lalaon’ny CJSOI andiany faha-11.
Miaritra kely fa hanana ny soa ve ?
“Ny hisavorovoroan-kilantoana”, hoy ny fomba fitenintsika Malagasy. Ao anatin’ny savorovo politika tokoa isika amin’izao fotoana, saingy indrisy fa efa mitatao amin’ny sarambabem-bahoaka ny krizy ara-tsosialy.
Voafitaka ny vahoakan’i Faratsiho Tsy hisy indray ny asa fanamboaran-dalana
Any Ampefy mandalo Soavinandriana sisa amin’izao no lalana hahafahana miditra ao Faratsiho, Faritra Vakinankaratra. Potika tanteraka mantsy ny lalana avy any Sambaina, lalam-pirenena fahafito mihazo an’ity distrika iray ity rehefa tsy nisy fanamboarana an-taonany maro.
Taksibe 194 Mikolay ireo mpanjifany
Maro ireo zotra mpitatitra efa nampitaraina fa ny an’ny zotra 194 mampitohy an’Andrainarivo sy Andranomena efa tafahoatra ny tsy fanajana mpandeha sy tsy mety ataony, hoy ny mpanjifa iray.
Fampiroboroboana ny indostria maitso Fampandrosoana ny toekarena sady fitsinjovana ny ho avy
Ilaina ny fananganana indostria ary efa fantatra maneran-tany ankehitriny fa dingana iray lehibe tsy azo ihodivirana eo amin’ny fampandrosoana ny toekarena ny fampiroboroboana azy.
Che Bel Canto Mahaleo Hafa ihany ny Andrarezina
“Revy” hatrany no fantatra fa fotoana ifanomezana amin’ny tarika Mahaleo hatramin’izay. Hafa kosa, ary nahafaly ireo mpankafy ny nahafantatra fa hanao ny « Che Bel Canto » ity tarika ity.
ATAO FITAOVANA POLITIKA
Ataon’ny mpanao politika fitaovana hatrany ny vahoaka malagasy isaky ny misy tolona. Tsy nisy nahay nandray lesona ny fitondràna izay nisesy fa namerina ny tsy nety teo aloha hatrany.
Solombavambahaoaka efa nisotro ny aleoko maty izahay, ka tsy hiala raha tsy miala ny fitondram-panjakana.
Fikambanana Ahmadiyya Hitsabo maimaimpoana eto Madagasikara
“Fitiavana ho an’ny rehetra. Tsy fankahalana an’iza na iza.” Io no teny filamatry ny avy eo anivon’ny fikambanana silamo Ahmadiyya.